Best Valentine’s Day Gifts For Your Partner - အချစ်အတွက်လက်ဆောင်
Best Valentine’s Day Gifts For Your Partner – အချစ်အတွက်လက်ဆောင်0603
We agree with the fact that “everyday is Valentine’s Day”, but 14 of February is the best day to show love to our partner. This year, Shop App MM will tell youasecret on how to make your partner happy by giving the best Valentine’s gifts.
Before we started, let us deliver youawonderful message;
Shop App MM is now celebrating the most loveable festival, the Valentine’s Love Sale, where it offers more than thousands of products with attractive promotions and millions of Discount Coupons that you can use on your orders to get “Double Discount”. Plus everyday Free Shipping is available during the campaign.
So, what are you waiting for? Let’s check it now HERE!
အချစ်ငှက်မောင်နှံများအတွက် နေ့ရက်တိုင်းဟာချစ်သူများနေ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ချစ်ခြင်းတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ကတော့ မိမိချစ်ရသူအပေါ် ချစ်ကြောင်းပြသဖို့အတွက် အကောင်းအချိန်အခါပါပဲ။
ဒါကြောင့် Shop App MM မှ ဒီနှစ် ချစ်သူများနေ့မှာ မိမိချစ်ခင်ရသူများအတွက် ဘယ်လိုလက်ဆောင်တွေပေးပြီး အချစ်ဖော်ကြူးရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နှစ်လိုဖွယ်အကောင်းဆုံး Valentine’s Love Sale စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကို Shop App MM မှာ “Up-To-80% OFF” လျှော့စျေးအစီအစဉ်၊ နှစ်ထပ်ကွမ်းလျှော့စျေးရရှိမယ့် သန်းပေါင်းများစွာသော ကူပွန်ကုတ်များ၊ ပွဲတော်ကာလအတွင်း နေ့စဉ်အခမဲ့ပို့ဆောင်မှု အစီအစဉ်များပါဝင်သွားမှာဖြစ်‌ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်နော်။ စျေးပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
Chocolate – ချောက်ကလက်
You cannot pass the February 14th without Chocolate. If you did, you will be unlucky the whole year. Kidding! As Chocolate is every partner’s dream snack to have on Valentine’s Day, you shouldn’t forget it.
ချောကလက်မပါဘဲ ချစ်သူများနေ့ကိုကျော်ဖြတ်လို့မရပါဘူး။ ကျော်ဖြတ်ခဲ့မိလျှင် တစ်နှစ်စာလုံး ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတတ်ပါတယ်။ တကယ်မဟုတ်ပါဘူး၊ နောက်တာပါ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ မှာ ချောကလက်ရရှိတဲ့ ဓလေ့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ချစ်ရသူတိုင်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်လို့ မေ့ထားလို့မရပါဘူး။
Preserved Fresh Bouquet – ထာဝရပန်းစည်း
Girlfriends love to receive food and bouquets, too. In the 21st century, flowers can bloom eternally just like your love for your partner. And hence, preserved fresh roses are the best bouquets to show your immortal love.
မိန်းကလေးတွေဟာ အစားအသောက်ပြီးရင် ပန်းစည်းကိုနှစ်သက်ကြသတဲ့။ ၁၂ ရာစုရဲ့ Preserved Fresh ပန်းစည်းတွေဟာ သင့်အချစ်တွေလိုပဲ ဘယ်တော့မှ မညှိုးနွမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ ထာဝရရှင်သန်နိုင်မယ့် သင့်အချစ်နဲ့ ဖော်ကြူးပြသဖို့ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါပဲ။
Watch – နာရီ
Everyday is Valentine’s Day and every time is Love O’clock for the love birds. Watches are the best gift if you want your partner to remember you as every second passes.
ချစ်ငှက်မောင်နှံများအတွက် နေ့ရက်တိုင်းက ချစ်သူများနေ့ဆိုရင် အချိန်တိုင်းကလည်း အချစ်တွေနဲ့လည်ပတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို စက္ကန့်တစ်မျှသတိရဖို့အတွက်ဆို နာရီက အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါပဲ။
Perfume – ရေမွှေး
You want to givealuxury product but you don’t want to spend much during the crises. Budget inspired perfume would be the best option you will make. Every time he wears it, he feels like
ချွေတာရေးကာလမှာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကိုလည်း လက်ဆောင်ပေးချင်တယ်၊ အသုံးစရိတ်လည်းချွေတာချင်သူများအဖို့ Budget သို့မဟုတ် Inspired ရွှေမွှေးတွေကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ သူရေမွှေးဆွတ်တိုင်း သင့်ကိုသတိရနေမှာပါ။
Skincare/Cosmetics – တစ်ကိုယ်ရည်သုံး အလှကုန်
Show your careful and kind-hearted soul to your partner by giving daily used lifestyle products for every man and woman such as Skincare & Cosmetics.
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုင်း နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သုံးအလှကုန်များက သင့်ချစ်သူရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်တာဖြစ်လို့ Skincare သို့မဟုတ် Cosmetics များကို လက်ဆောင်ပေးခြင်း သင့်ရဲ့ သဘောထားကြီးစွာဂရုစိုက်မှုကို ပြသရာရောက်ပါတယ်။
Shoes – ဖိနပ်
Leave your extreme belief in the 12st century and boost the confidence of your partner’s steps withapair of nice and comfortable shoes.
ဖိနပ်လက်ဆောင်ပေးခြင်းက ကံဆိုးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတဲ့ အယူကို ၂၁ ရာစုမှာ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး သင့်ချစ်ရသူရဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းကို ယုံကြည်မှုတွေ တိုးစေဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ဖိနပ်တစ်စုံနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါ။
Purse/Wallet – ပိုက်ဆံအိတ်
Your partner’s financial statement is your future andawallet or purse is their daily used item. Show your care by givinganice wallet and they will always remember you whenever they use it. သင့်လက်တွဲဖော် နေ့စဉ်အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုပြသလိုက်ပါ။ သူ cash နဲ့ငွေချေတိုင်း သင့်ကိုသတိရနေမှာ အမှန်ပါပဲ။
Rings – စုံတွဲလက်စွပ်
Couple Rings are the best to prove the couple sign and are one of the most suitable presents for Valentine’s Day.
စုံတွဲလက်စွပ်လေးတွေဟာ အချစ်သက်သေထူဖို့ အကောင်းဆုံးပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ချစ်သူများနေ့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလက်ဆောင်တွေထဲကတစ်ခုပါ။
Modern Tech Gadget – ခေတ်မီ အီလက်ထရွန်နစ်
In the digital era, giving your partner’s favorite modernized tech gadget asaValentine’s gift is the smartest way to impress your partner. There are plenty of products in this category such as digital watches, earbuds, bluetooth speakers, etc,.
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ သင့်ချစ်ရသူကြိုက်တတ်တဲ့ ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ ဒီဂျစ်နာရီ၊ နားကြပ်၊ စပီကာ အစရှိတဲ့ အမိုက်စားပစ္စည်းများကို Valentine’s လက်ဆောင်ပေးခြင်းကလည်း တစ်ဖက်သူကို အံ့အားသင့်ပျော်ရွှင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Plush Pillow & Pajamas – ညဝတ်အင်္ကျီနဲ့ အမွှေးပွအရုပ်
Bed is the best paradise afteralong tired day for everyone. A smooth pajamas and fluffy plush pillow will help to get closer with your partner when they go to bed.
နေ့စဉ်လှုပ်ရှားပင်ပန်းပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ လူတိုင်းရဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံကတော့ အိပ်ယာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ယာဝင်တိုင်း မိမိနဲ့အတူရှိပြီး အမြဲသတိရအတွက်ကို အိစက်ညက်ညောတဲ့ ညဝတ်အင်္ကျီတစ်ထည်နဲ့ အမွှေးပွအရုပ်လေးတွေက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
Do not be tired of choosing the best Valentine’s gift. Shop App is in your hands, helping you to make the best choice!
ကဲ .. ဒီလောက်ဆို ဒီနှစ် Valentine’s Day မှာ မိမိချစ်ရသတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ခေါင်းရှုပ်နေစရာမလိုတော့ဘူးနော်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နှစ်လိုဖွယ်အကောင်းဆုံး Valentine’s Love Sale စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးလည်း Shop App MM မှာကျင်းပနေပြီဖြစ်လို့ အခုပဲ Shop App နဲ့အတူ မိမိချစ်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တော့ …
စျေးပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
DarazDaraz MMGiftLovePresentShop AppShop App MMShop MMV-day GiftsValentine's day
Previous Article၁၂ လရာသီခွင်တွေကပြောမယ့် ၂၀၂၂ ရဲ့ သင့်အချစ်ရေးNext ArticleBest Cheap Earphones – အကောင်းဆုံး အတန်ဆုံး နားကြပ်